डेङ्गु र स्क्रबटाइफसबाट चार जनाको मृत्यु - Lokpath Lokpath
१७ भाद्र २०७६, मंगलवार १५:०२
डेङ्गु र स्क्रबटाइफसबाट चार जनाको मृत्यु
प्रकाशित मिति : १७ भाद्र २०७६, मंगलवार १५:०२
चितवन । डेङ्गु र स्क्रबटाइफसबाट भरतपुर चितवन मेडिकल कलेजमा तीन र पुरानो मेडिकल कलेजमा एकसहित चारजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका किट नियन्त्रक राम केसीका अनुसार पछिल्लो पटक गैँडाकोटका २८ वर्षीय युवतीको स्क्रबटाइफसबाट पुरानो मेडिकल कलेज र अन्य तीन जनाको चितवन मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो । जसमध्ये गैँडाकोट स्थायी घर भई नारायणगढ बसोवास गर्ने ७१ वर्षीय वृद्धको डेङ्गुको कारण मृत्यु भएको हो । रौतहटबाट उपचारका लागि आएका ३४ वर्षीय पुरुषको स्क्रबटाइफस र शुक्रनगरकी १६ वर्षीया किशोरीको डेङ्गु र स्क्रबटाइफस सङ्क्रमणको कारण मृत्यु भएको केसीले जानकारी दिनुभयो ।
दुवै रोगको सङ्क्रमण बढ्दो छ । जिल्लाका अस्पतालमा साउनयता एक हजार ९०८ जनाको डेङ्गु परीक्षण गर्दा ६२३ जनामा सङ्क्रमण देखिएको केसीले बताउनुभयो । जसमध्ये ४५५ जना चितवनका रहेका छन् । यसमध्ये पनि ४१४ जना भरतपुर महानगरपालिकाका रहेको उहांँको भनाइ थियो ।
महानगरमा सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि सचेतनाका कार्यक्रमलाई तीव्र पारिएको छ । जसअन्तर्गत गत शनिबार सचेतना ¥याली निकालिएको थियो । दैनिक माइकिङ गर्ने, लार्भा खोज र नष्ट गर अभियान सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्य वडा तहसम्म भइरहेको महानगरले जनाएको छ । केसीका अनुसार स्क्रबटाइफसका बिरामीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ । सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि जिल्लाका अधिकांश अस्पताल भरिएका छन् ।
महाशिवरात्रीको व्रत सकिएपछि के खाने, के नखाने ? चिकित्सकको यस्तो सुझाव
काठमाडौं । आज महाशिवरात्रीको अवसरमा धेरैले व्रत बस्नुभएको होला । व्रत गर्नु स्वास्थ्यका
छोरी घरबाहिर पढ्न सकोस् भनेर यी महिलाले बनाइन् ‘एन्टी कोरोना भाइरस टेन्ट’
काठमाडौं । चीनमा कोरोना भाइरसका कारण धेरै मानिसहरुलाई बिभिन्न समस्यासँग जुध्नु परेको छ
कोरोनाका कारण जापानी क्रुजमा राखिएका दुई जनाको मृत्यु
काठमाडौं । जापानको तटमा छोडिएको डायमन्ड प्रिन्सेस क्रुज सिपमा कोभिड १९ (कोरोना भाइरस)
कुकुरलाई एक्लै छोडेर निस्किएका मालिक कोरोनाले घर फर्किन पाएनन्
काठमाडौं । कोरोना भाइरसले अहिले सारा संसारलाई नै तहस नहस बनाएको छ ।
उपसभामुख निर्वाचन अन्योलमा
काँग्रेसले बोलायो छाया सरकारको बैठक
आकाशबाट अचानक १५ हजार बेलुन झरेपछि !
गोकुल बास्कोटामाथि छानबिन नगर्ने पक्षमा केपी ओली
थपिँदै पेट्रोल पम्प
महान दार्शनीक प्लेटोका विशेषोपयोगी १८ भनाईहरु